Ị chọrọ kwesịrị ekwesị ndu n'ihi na Hotmail Banye? Gaa site n'isiokwu a nke m kere iji nye gị kwesịrị ekwesị na zuru ezu ozi banyere Olee otú Nbanye Hotmail Account. Ọ bụrụ na ị kere gị Hotmail akaụntụ wee pịa Ebe a ka Mepụta Hotmail Account mbụ.
N'ihi na ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ na ị chọrọ inye gị nzaghachi banyere isiokwu a-enye ya na-eji n'okpuru aha comment igbe. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ Gmail nbanye dị ka a dị iche iche ọrụ ị nwere ike ịlele a post ga-eduzi ka nzọụkwụ site nzọụkwụ.